विश्व क्रिकेटमा ११ वर्ष पूरा गरेका विराट कोहलीका ११ रेकर्ड - Everest Dainik - News from Nepal
विश्व क्रिकेटमा ११ वर्ष पूरा गरेका विराट कोहलीका ११ रेकर्ड
काठमाडौंः भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विराट कोहलीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा ११ वर्ष पूरा गरेको उपलक्षमा ट्वीट गर्दै आफ्नो खेल जीवनका उपलब्धि साझा गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा निकै राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका कोहलीले ट्वीटरमा केही तस्बिर सार्वजनिक गर्दै सन २००८ मा आजकै दिन एउटा किशोरको रूपमा यो यात्रा सुरु गरेको र एघार वर्षपछि यो यात्रा सम्झिँदा ईश्वरको कति धेरै अनुकम्पा भएको रहेछ भनेका छन् ।
आफ्नो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा मात्र १२ रन बनाएर आउट भएका विराटले त्यसपछि पछाडि फर्केर हेरेनन् र उनी हाल क्रिकेटका सर्वकालिक ब्याट्सम्यान सचिन तेन्दुलकरसँग दाँजिने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विराटले यस ११ वर्षको समयावधिमा थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय रेकर्ड बनेका छन् । तीमध्ये ११ वटा रेकर्ड यसप्रकार रहेका छन्:
एकदिवसीय क्रिकेटमा लक्ष पछ्याउँदै सर्वाधिक शतक
एकदिवसीय क्रिकेटमा लक्ष पछ्याउने क्रममा विराट कोहली सबैभन्दा खतरनाक ब्याट्सम्यान मानिन्छन् । उनी हालसम्म १३१ पल्ट लक्ष पछ्याउन मैदानमा उत्रिएका छन् र यस क्रममा उनले २६ शतक लगाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस टी–२० क्रिकेटः कोहली र शर्माले बनाए समान २६३३ रन!
एकदिवसीय क्रिकेटमा लक्ष पछ्याउँदै सर्वाधिक विजयी शतक
त्यतिमात्र होइन कोहलीले लक्ष पछ्याउने क्रममा लगाएका २६ शतकमध्ये २२ मा उनको टीमले जीत हात पारेको छ । यो आफैंमा एउटा विश्व रेकर्ड हो ।
टी-२० मा सर्वाधिक अर्ध शतक
क्रिकेटको हरेक फर्म्याटमा रेकर्ड बनाएका कोहलीले टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा पनि सर्वाधिक अर्ध शतक लगाएका छन् । उनले हालसम्म २१ अर्ध शतक लगाएका छन् ।
टेस्ट क्रिकेटमा सर्वाधिक दोहोरो शतक लगाउने कप्तान
कोहलीले टेस्ट क्रिकेटमा पनि निकै राम्रो प्रदर्शन गरेका छन् । उनले हालसम्म क्रिकेटको यस लामो फर्म्याटमा कप्तानको भूमिका निर्वाह गर्दै ६ पटक दोहोरो शतक लगाएका छन् । उनले आफ्नो करिअरको पहिलो दोहोरो शतक पनि कप्तान बनेपछि लगाएका थिए ।
कप्तानको रूपमा लगातार पारीमा सबैभन्दा बढी शतक
सन् २०१४ मा विराटले भारतीय क्रिकेटको नेतृत्व सम्हालेपछि उनले पहिलो टेस्टको दुवै परीहरूमा शतक लगाए । त्यसपछि उनले एउटा अर्को शतक अर्को टेस्टको पहिलो पारीमा समेत लगाए । यसरी उनले लगातार्र तीन पारीमा तीन शतक लगाउने कप्तानको समेत रेकर्ड बनाएका छन् ।
याे पनि पढ्नुस सुनको मूल्य इतिहासकै महँगो, कतिमा हुँदैछ कारोबार?
एकदिवसीय क्रिकेटमा सबैभन्दा तीव्र गतिमा १० हजार रन
एकदिवसीय क्रिकेटमा उनी सबैभन्दा तीव्रत गतिमा १० हजार रन पूरा गर्ने खेलाडी हुन् । उनले २०५ औं पारीमा सचिन तेन्दुलकरको २५९ पारीको रेकर्ड तोड्दै १० हजार रन पूरा गरेका थिए ।
लगातार तीन वर्षसम्म एक हजार भन्दा बढी रन बनाउने कप्तान
कप्तानको रूपमा विराटले २०१६, २०१७ र २०१८ मा प्रत्येक वर्ष एक हजार रन भन्दा बढी रन टेस्ट क्रिकेटमा बनाएर अनौठो रेकर्ड कायम गरेका छन् ।
लगातार चार शृंखलामा चार दोहोरो टेस्ट शतक
टेस्ट क्रिकेटमा ६ पटक दोहोरो शतक लगाएका विराटले ४ वटा दोहोरो शतक लगातारका श्रीन्ख्लाहरूमा लागेका थिए । उनी यस्तो रेकर्ड बनाउने विश्वकै एकमात्र खेलाडी हुन् । यस अघि राहुल द्रविड र डन ब्राडम्यानको नाममा लगातार तीन टेस्ट शृंखलामा तीन दोहोरो शतक लगाउने रेकर्ड थियो ।
याे पनि पढ्नुस भारतको तेस्रो विकेट पतन, अर्धशतक बनाउन चुके कोहली
कप्तानको रूपमा कुनै टीमविरुद्ध सर्वाधिक एकदिवसीय शतक
एउटा कप्तानको रूपमा विराट कोहलीले टीमविशेष विरुद्ध सर्वाधिक शतक लगाउने रेकर्ड समेत बनाएका छन् । उनले वेस्टइन्डिजविरुद्ध हालसम्म १४ पारीमा ब्याटिङ गरेका छन् जसमा उनले ७ पटक सयभन्दा बढी रन बनाएका थिए ।
खेलाडीको रूपमा कुनै टीम विशेषविरुद्ध सर्वाधिक एकदिवसीय शतक
खेलाडीको रूपमा कुनै विशेषटीमविरुद्ध सर्वाधिक शतक लगाउने रेकर्डमा पनि उनले सचिन तेन्दुलकरको बराबरी गरेका छन् । सचिनले अस्ट्रेलियाविरुद्ध ९ पटक शतक लगाएका थिए भने विराटले वेस्ट इन्डिजविरुद्ध ९ शतक लगाएर सचिनको बराबरी गरिसकेका छन् ।
कप्तानको रूपमा सर्वाधिक एकदिवसीय शतक लगाउनेमा दोस्रो
विराट कोहली कप्तानको रूपमा खेल्दै सर्वाधिक एकदिवसीय शतक लगाउने खेलाडी अस्ट्रेलियाका पूर्व कप्तान रिकी पोन्टिंग हुन् । उनले २२० पारीमा अस्ट्रेलियाको नेतृत्व गरेर २२ शतक लगाएका छन् । विरतले हालसम्म ७६ पारीमा भारतको नेतृत्व गरेका छन् र जम्मा २१ शतक लगाएका छन् ।
मन्दिरको मुख्य पुजारीमा रोबोट नियुक्त
ट्याग्स: Records of Virat Kohli, रेकर्ड, विराट कोहली